Ra’iisul Wasaaraha Dalka Spain Oo Real Uga Digay Saxiixa Neymar Jr & Sababta Oo La Ogaaday - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
February 13, 2018 at 13:09 Ra’iisul Wasaaraha Dalka Spain Oo Real Uga Digay Saxiixa Neymar Jr & Sababta Oo La Ogaaday2018-02-13T13:09:21+00:00 CAYAARAHA
Iyadoo ay sii kordhayaan guuxa ku aadan in Real Madrid ay xusul duub ay ugaleyso saxiixa ciyaaryahanka dalka Brazil, ee Neymar Jr ayaa waxaa uga digay arrintaas Los Blancos, Ra’iisul Wasaaraha dalka Spain, Mariano Rojoy.
Mr. Rojoy oo wareysi siiyay Wargeyska AS, ee kasoo baxa dalka Spain ayaa wuxuu cod dheer ku tilmaamay in Real Madrud aysan ubaahneen saxiixa laacibka hadda ah kan ugu qaalisan dhamaan kubadda cagta Dunida.
Wuxuu cadeeyay inuu rajaynayo in Boqoradda horyaalka dalka Spain, aysan lasoo wareegin Neymar, islamarkaana uu jeclaan lahaa in uusan arkin xidigii hore ee Barcelona, kasoo xiran Maaliyadda Madrid.
Mar la weydiiyay hadii Real ay lasoo wareegi karto Neymar, ayuu ku jawaabay Mariano Rojoy: “Maya, mana aanan jeclaan lahayn inaan arko Neymar oo xiran Maaliyadda Madrid.
Hadalka Ra’iisul Wasaaraha dalka Spain, ayaa waxay ku macneyso Shabakadda Don Balon, ee dalka Spain inuu yahay niyad jab hor leh, kaasoo soo gaaray Jamaahiirta Madrid, kuwaasoo uhan-qaltaagayay saxiixa Neymar.
Maamulka Madrid ayaa la rumeysan yahay inay u arkaan Neymar, bedalka saxda ah ee Cristiano Ronaldo, kaasoo ay hadda ka taalo, isagoona Isbuucii hore 33-sano jir noqday, waxaana uu qirtay in da’da ay ka daba-timid.
Labadaan wiil ayaa habeenka Arbacadda ah ee Todobaadkan waxay isaga hor imaan doonaa kulan ciyaareedka ka tirsan Champions League, kaasoo ay wada dheeli doonaa Real Madrid iyo PSG, waana kulan aad loo wada sugayo.
« Naaneysta Siyaasadeed ee Soomaalida !!!.
Wasiir Bayle oo daah furay mashruuc shaqo loogu abuurayo dhalinyarada »